Zeevou | पुरस्कार विजेता PMS, च्यानल प्रबन्धक र बुकिंग इञ्जिन
प्रत्यक्ष बुकिंग वेबसाइट
--D सुरक्षित लिंकहरू
सेल्फ चेक इनहरू
नयाँ सुविधाहरू चाँडै आउँदैछन्
गुगलको नि: शुल्क बुकिंग लि .्कहरू
ओपायो Elavon द्वारा
गुगल खोज कन्सोल
Google ट्याग प्रबन्धक
पुरस्कार विजेता PMS र च्यानल प्रबन्धक
Zeevou एक सम्पत्ति ब्यवस्थापन प्रणाली र च्यानल प्रबन्धक हो जुन तपाईंको छोटो अवधिको भाडा व्यवसायको सबै क्षेत्रहरू स्वचालित गर्दछ, प्रक्रियाहरूलाई अनुकूलन गर्दछ, र मानवीय त्रुटि कम गर्दछ।
सुविधाहरू जुन तपाईंको व्यवसायलाई एकपटक र सबैका लागि परिवर्तन गर्दछ
Zeevou को बहु-स्थान PMS ले तपाईंलाई एक केन्द्रीय लगइनबाट तपाईंको सबै सम्पत्तिहरू प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रत्येक बुकिंग सबै बक्सहरूमा टिकिक सुनिश्चित गर्नुहोस्, जहाँसुकै आउँदैन।
तपाईंको सबै चेक इनहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् - keyafes, स्मार्ट लक, वा कीनेस्ट - Zeevou मार्फत।
हाम्रो एसईओ मैत्री वेबसाइट शीर्ष एनालिटिक्स उपकरणको साथ एकीकृतको साथ तपाईंको सीधा बुकिंग बूस्ट गर्नुहोस्।
तपाईको दरहरू र उपलब्धतालाई वास्तविक समयमा पाश गर्नुहोस् २०० भन्दा बढी च्यानलहरू हाम्रो शक्तिशाली दुई-तर एपीआई जडानहरूको साथ।
Zeevou को भुक्तानी प्रक्रिया तपाइँ तपाइँको भुक्तानी को नियन्त्रण मा हुन अनुमति दिनुहुन्छ, यसैले तपाइँको नगदी प्रवाह सुधार।
तपाईंको हाकिमहरूलाई सहजै जानकारी पहुँच गर्न दिउँदछ र तपाईंको भाँडा प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
कुनै पनि बिन्दुमा तपाईंको व्यवसायको प्रदर्शनको राम्रो सिंहावलोकन गर्नुहोस् - यो वित्तियता, व्यवसाय वा अपरेशन हुनुहोस्।
एक केन्द्रीय स्थानबाट अतिथिहरू र कर्मचारीहरूको लागि सबै संचारहरू (ईमेलहरू र एसएमएसहरू) प्रबन्ध गर्नुहोस् र सबै कुरा ट्र्याक राख्नुहोस्।
अत्यधिक लचिलो बिल्ट-इन अतिथि सीआरएम पहुँच गर्नुहोस् जसले ईमेल ठेगाना संग्रहलाई स्वचालित बनाउँदछ र औँला नलागी GDPR- अनुरूप डाटाबेस बनाउँनुहोस्।
तपाईंको सफाई व्यवस्थापन स्वचालित गर्नुहोस् - यो घरका कर्मचारीहरूसँग वा एक आउटसोर्स सफाई कम्पनीमा सम्झौता गरेर।
Zeevou लगानीकर्ता र घरमालिक जसले छुट्टी भाडा प्रबन्धन कम्पनीहरूसँग काम गर्छन् उनीहरूको आय वास्तविक समयमा हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ।
Zeevou तपाईं सजिलैसँग सबै मर्मत सम्बन्धी मुद्दाहरूको शीर्षमा राख्न र A देखि Z सम्म तिनीहरूको प्रगति जाँच गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी तपाईंलाई प्रीमियम समर्थन प्रदान गर्दछौं किनकि हामी पूर्ण रूपमा सचेत छौं कि हाम्रो सफलता तपाईंकोमा निर्भर गर्दछ।
Zeevou ले तपाईंलाई आफु र मालिकको लागि नाफा गणना स्वचालित गर्न सक्षम गर्दछ।
Zeevou को साथ एक शानदार अतिथि अनुभव प्रदान गर्नुहोस् र तपाईंको व्यापार मजबुत देखि एक शक्ति बढ्न हेर्नुहोस्!
तपाईंको सबै अपरेशनहरू केन्द्रीय रूपमा प्रबन्ध गर्नुहोस्, र तपाईंको दिन-देखि-दिन प्रशासनिक कार्यहरूको ठूलो अंश स्वचालित गर्नुहोस्।
Zeevou तपाईं सजिलैसँग बहु गुणहरूको लागि बल्कमा दरहरू सेट गर्न वा गतिशील मूल्य निर्धारण उपकरणहरू प्रयोग गरेर मूल्यहरू धक्का दिन्छ।
यो अनौंठो सुविधा प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको रातको, साप्ताहिक, र मासिक भाँडा सबै एक केन्द्रीय लगइनबाट।
नयाँ सुविधाहरू प्रत्येक महिना रिलिज हुन्छन्, किनकि हामी लक्ष्य गर्दै छौं उद्योगलाई आकार दिने।
तपाइँका प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्नुहोस्
र सिट पछाडि
Zeevou पार्टनरहरूको एक विस्तृत विविधता संग एकीकृत तपाईं मूल्य निर्धारण, अतिथि जाँच, संचार र लेखा को लागी तपाइँको आतिथ्य व्यवसाय को हरेक पक्ष स्वचालित सक्षम गर्न को लागी।
कुन कुराले हामीलाई फरक बनाउँछ?
Zeevou मा हाम्रो टीमले धेरै अनौंठो सुविधाहरू विकास गरेको छ, हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रियामा आधारित जुन उत्पादनलाई वास्तविक जीवन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम गर्दछ। हामी नवीनता, दक्षता, र विकास मा विश्वास गर्दछौं। हामी विकास, विकास र चीजहरू एक अद्वितीय तरीकाले गर्दछौं। हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट के फरक पार्दछ भनेर पत्ता लगाउन, तलको बटन ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईंको पहुँच चौडा गर्नुहोस्
200+ च्यानलहरूमा जडान गरेर
सकेसम्म धेरै च्यानलहरूमा तपाईंको भाँडा सूचीबद्ध गरेर ओभरबुकिंग बेवास्ता गर्दा तपाईंको खाली रात भर्नुहोस्। Zeevou को शक्तिशाली, वास्तविक-समय, २-मार्ग एपीआई जडान क्षमता मार्फत हाम्रा २०० भन्दा बढी साझेदार च्यानलहरूमा केही क्लिकहरूको साथ तपाईंको दरहरू र उपलब्धता वितरण गर्नुहोस्।
स्वचालन भनेको हामी मा उत्कृष्टता के हो! Zeevou मा तपाईंको सम्पत्ति लोड गर्न सुरू गर्नुहोस्, तपाईंको दरहरू, उपलब्धता सेट गर्नुहोस्, र च्यानलहरू हुक गर्नुहोस्। प्रशासक समय बचत गर्नुहोस् र यसलाई विकासमा लगानी गर्नुहोस्। तब पछाडि बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस्, र रमाउनुहोस्!
तपाईंको व्यवसाय बढ्न र मापन गर्न तयार हुनुहुन्छ? Zeevou तपाईंको सांसारिक कार्यहरू र प्रक्रियाहरू स्वचालित रूपमा दिनुहोस्। तपाईं केवल आफ्नो नाफा बढाउनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। हामी तपाईंको लागि भारी लिफ्टिंग गरौं। यस्तो सरलता!
Zeevou PMS र च्यानल प्रबन्धक मात्र होईन। हामी ओटामा तपाईंको निर्भरता कम गर्ने बारेमा छौं। सेनामा सामेल हुनुहोस्, उद्योगलाई बाधक बनाऔ र प्रत्यक्ष बुकिंग क्रान्तिलाई महसुस गरौं! यस्तो अवसर!
हाम्रो पूर्ण नि: शुल्क प्रत्यक्ष बुकिंग प्लेटफार्ममा सम्मिलित हुनुहोस्
Zeevou Direct मा तपाईंको सम्पत्ति सूचीबद्ध गर्नुहोस् र प्रत्यक्ष बुकिंगबाट राम्रो तरीकाले योग्य पैसा हेर्नुहोस् तपाईंको जेबमा सिधा। के तपाईंलाई थाहा छ धेरै बुकि plat प्लेटफर्महरूले शुल्कमा १-15-२25% लिन्छन्? Zeevou Direct को साथ, दुबै होस्ट र अतिथिहरूले राम्रो सम्झौताहरू पाउँदछन् किनभने त्यहाँ कुनै तेस्रो पक्षले कटौती गरिरहेको छैन। साथै, कुनै होस्ट र अतिथि सम्पर्क जानकारी रोकिएको छैन, त्यसैले तपाईंसँग तत्काल, सीधा संचार हुनेछ। अहिले नै नि: शुल्क साइन अप गर्नुहोस् र प्रत्यक्ष बुकिंग क्रान्तिलाई महसुस गर्न सहयोग गर्नुहोस्! कुनै तार जोडिएको छैन!
मूल्य-को लागि सबै मूल्यहरूका लागि मूल्य निर्धारण प्याकेजहरू
कुनै आयोग छैन, बिचौलिया छैन, लुकेको शुल्क छैन!
संरक्षकहरूको लागि सम्भावनाहरू कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। हाम्रो मासिक वा वार्षिक योजनाहरूको सदस्यता लिएर Zeevou को पूर्ण शक्ति मुक्त गर्नुहोस् र बाँकी हामी छोड्नुहोस्। Zeevou को PMS, च्यानल प्रबन्धक, र बुकिंग ईन्जिनले प्रस्ताव गर्नु पर्ने सबै पहुँच गर्नुहोस्। असीमित सुविधाहरूको आनन्द लिनुहोस् र आराम गर्नुहोस्।
(नि: शुल्क योजना)
एक एसईओ मैत्री, सीधा बुकिंग वेबसाइट पाउनुहोस् र हाम्रो भाँडा भाडा हाम्रो कमिशन-फ्री बुकिंग प्लेटफर्म, Zeevou Direct मा सूचीबद्ध गर्नुहोस्। तपाईंको प्रत्यक्ष बुकिंगको प्रसंस्करणलाई स्वचालित गर्नुहोस्। आज सेनाहरूमा सामेल हुनुहोस् र पार्टनर होस्टहरूको हाम्रो नेटवर्कलाई हाम्रो पहुँच फराकिलो बनाउन मद्दत गर्नुहोस्!
वार्षिक संरक्षकलाई एक शब्द
तपाईसँग धेरै इकाइहरू छन्, तपाईले कम प्रत्येक इकाईको लागि भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
ईभान्जलिस्ट वा संरक्षक?
हाम्रो पार्टनर होस्टहरू हाम्रो बारेमा के भन्छन्
सबैभन्दा पहिले, मलाई लाग्छ सेवाहरू र मद्दत तपाई Zeevou बाट प्राप्त मात्र शानदार हो। अन-बोर्डि session सत्रहरू, तपाईंको ट्रेनरमा सीधा व्हाट्सएप सम्पर्क, फेसबुक मेसेन्जर साथै Zeevou साइटमा अनलाइन च्याट। तपाई अझ बढि माग्न सक्नुहुन्न। अरू जस्तो मनपर्‍यो, केहि समय लिन केहि समय लाग्छ जब सम्म तपाईं यसको प्रयोग नगरे सम्म र म अब खोज्दै छु Zeevou अब मद्दत लेखको आवश्यकता बिना FAQ को पनि अचम्मको उपकरण हो जुन तपाईंले आफ्नो चीजहरूमा प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ। आफैले आफैलाई शिक्षा दिनुहोस्। यसमा तपाईलाई कुञ्जी कोडहरू, सफाई कार्यतालिका, स्वचालित ईमेलहरू र यस्तै अरू धेरै आवश्यक छ र मलाई खुशी लाग्छ कि मैले Zeevou भेट्टाएको छु र अरु कसैसँग जानु अघि मेरो अनुसन्धान गरेको छु।
पौराणिक सेवा सेवा आवास लिमिटेड
हामीले Zeevou लाई केहि हप्ताको लागि प्रयोग गर्यौं र मेरो लागि स्ट्यान्ड आउट फाइदा सेवा हुनु पर्छ। एक पूरा घण्टा प्रदर्शन बुक गर्न सक्षम हुनु मेरो Zeevou यात्राको लागि एक राम्रो सुरुवात हो जुन १. 1.5 घण्टाको अनबोर्डि session सत्र द्वारा अनुसरण गरिएको थियो र म जिवेउमा मेरो सम्पर्क सन्देश पठाउन सक्षम छु जब मलाई मन पर्छ। सर्विस्ड आवास उद्योगको लागि नयाँ हुनु चुनौतीपूर्ण थियो र Zeevou पत्ता लगाउन सजिलो प्लेटफर्म होइन, तर कम्पनीको लामो अवधिसम्म ग्राहक सेवाको साथमा हुनु भनेको मलाई थाहा छ म मेरो पैसाको मूल्यमा छु!
ग्रीन वाल सम्पत्ती समाधान
म भन्न सक्दछु इमान्दारीको साथ Zeevou ले मेरो जीवन परिवर्तन गरेको छ! मेरो सेवायुक्त आवास व्यवसायमा अहिलेसम्म channel च्यानल प्रबन्धकहरू मार्फत भएपछि, मैले अन्तमा हाम्रो व्यवसायको लागि उत्तम फिट फेला पारे। एकदम सरल, Zeevou चीजहरू अति सरल बनाउँछ! यो छिटो छ, यो sooo प्रयोग गर्न सजिलो छ। Zeevou जॉइन भएदेखि मसँग मेरो व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्न बढी समय भयो! एसए व्यवसायको रूपमा हामी पुस्तक प्रत्यक्ष अभियानलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्छौं। Zeevou तपाईंलाई यो गर्न मद्दत गर्दछ। उपलब्ध समर्थन अद्भुत छ, यदि म फेसबुक प्रयोगकर्ता समूहमा प्रश्न सोध्छु भने केहि मिनेटमा उत्तर छ। Zeevou साँच्चै व्यस्त सर्विस्ड आवास प्रदायकको लागि एक उपहार हो। धन्यवाद!
मैले शून्य एकाईहरूको साथ सुरू गरें तर म चीजहरू बारे जान्न चाहान्छु कि जस्तो मसँग १०० छ भनेर म सुनिश्चित गर्न सक्दछु यदि म द्रुत र प्रभावकारी रूपमा मापन गर्न सक्छु। जीभौले च्यानल प्रबन्धनको सन्दर्भमा कुनै हराएको छैन र सीधा रूपान्तरण एकदम सीधा बनाउँदछ, उनीहरूलाई धन्यवाद कि हामी £ १०K को बुकिंग Air-रातको एयरक्राइबबाट सुरक्षित गरीरहेका थियौं। प्रगति र सुधारहरू स्थिर छन् र ती सुझावहरू राम्ररी लिन्छन् र परिवर्तनहरू लागू गर्दछन् जुन मैले सुझाव दिएँ जुन हेर्न योग्य छ। हाकिम मानिस आफैंले पनि एक चोटि हेरे पछि एक चोटि हेरेन जब म अड्किन्छु। यो किटको राम्रो अंश हो र एक वा दुई वर्षमा अचम्मको हुनेछ। क्रान्तिमा सम्मिलित हुनुहोस् ...
जीवौले Cl देखि १3युनिटमा क्लिफ्टोनभली अपार्टमेन्ट मापन गर्न सहयोग पुर्‍यायो। Zeevou एक उत्तम उपकरण हो जसले हामीलाई हाम्रा बुकिंगहरू, पाहुनाहरू, लगानीकर्ताहरू र वित्तीयलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। सिग्नेबल, जीरो र स्ट्राइपको साथ एकीकरण धेरै उपयोगी भएको छ र हाम्रो कामको बोझ कम गर्‍यो, जसले हामीलाई व्यापारका अन्य क्षेत्रहरूमा फोकस गर्न अनुमति दिँदछ। Zeevou समय को साथ सुधार गर्न जारी छ र चाँडै हाम्रो सेवा आवास व्यवसाय को सबै पक्षहरु को लागी एक व्यापक एक स्टप-शप बन्न जाँदै छ। Zeevou सुन्न को लागी उत्सुक छ र यसको उत्पादनहरु लाई अनुकूलन गर्न को लागी यसको प्रयोगकर्ताहरु को आवश्यकताहरु लाई राम्रो बनाउन को लागी। हामी विस्तृत रोडम्यापमा नयाँ सुविधाहरू प्रयोग गर्न को लागी अगाडि हेर्दछौं।
हाम्रा उपलब्धिहरूका केहि
"यद्यपि संसार दु: खले भरिएको छ, तर यो पनी यसलाई जित्न पनि पूर्ण छ।" हेलेन केलर
यसमा सामेल हुन तयार छ
प्रत्यक्ष बुकिंग क्रान्ति?
शक्तिशाली च्यानल प्रबन्धक
सम्पर्क रहित चेक-ईन
लूपमा बस्न चाहनुहुन्छ?
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० Zeevou | Zeevou लिमिटेड पहिलो फ्लोर केन्सिington्टन चेम्बरहरु मा पंजीकृत छ, / 2021/1० Kensington Pl, St Helier JE46 50ZE, Jersey, च्यानल द्वीपहरु संग पंजीकृत संख्या १ registered२4१। हामी विश्वव्यापी रूपमा पार्टनर होस्टको सेवा गर्न गर्व गर्दछौं।
युके: +44 (०)0800 9553966 1 | | संयुक्त राज्य अमेरिका: +१ (०)0855 855 9789 XNUMX .XNUMX | | info@zeevou.com
twitter फेसबुक LinkedIn WhatsApp इन्स्टाग्राम Pinterest त्याग
गोपनीयता नीति | सेवाका सर्तहरु
Zeevou VRMB को कीस्टोन पुरस्कार २०२१ जित्यो
यस वेबसाइटले तपाइँको कम्प्युटरमा कुकीहरू भण्डारण गर्दछ।
यी कुकीजहरू तपाइँ कसरी हाम्रो वेबसाइटसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ र हामीलाई तपाइँलाई सम्झना गर्न अनुमति दिनुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी संकलन गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामी यस जानकारीलाई तपाइँको ब्राउजि। अनुभव सुधार गर्न र अनुकूलन गर्नका लागि र यस वेबसाइट र अन्य मिडियामा दुबै हाम्रा आगन्तुकहरूको बारेमा विश्लेषण र मेट्रिक्सको लागि प्रयोग गर्दछौं। हामीले प्रयोग गर्ने कुकीहरूको बारेमा अझ बढी पत्ता लगाउन हाम्रो हेर्नुहोस् गोपनीयता नीति